Nayakhabar.com: तपाईलाई थाहा छ सबै भन्दा राम्रा महिला भएको देश कुन हो ? लौ हेर्नुस् राम्रा महिला भएका ११ देश
तपाईलाई थाहा छ सबै भन्दा राम्रा महिला भएको देश कुन हो ? लौ हेर्नुस् राम्रा महिला भएका ११ देश
काठमाडौं । सुन्दरता प्रत्येक मानिसको लागि भिन्न हुन्छ । एउटा मानिसलाई एकथरी राम्रो लाग्छ भने त्यही कुरा अरुलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । कसैलाई गोरी महिला राम्रो लाग्छ भने कसैको रोजाईमा कालो वर्णका महिलाहरु पर्न सक्लान् । तर, कोही महिला त्यस्ता हुन्छन् जो लगभग सबैको नजरमा राम्रा देखिन्छन् । यी महिलाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवार्ड पनि हात पार्न सफल भई देश विदेशतीर आफ्नो देशको नाम राख्दछन् । यहाँ आज हामी तपाईंलाई ती देशबारे बताउँदैछौं जसका धेरै महिलाले सुन्दरताको प्रतिस्पर्धामा शीर्ष स्थान हाँसिल गर्छन् ।
१ भेनेजुयलाः यो सूचीको सबैभन्दा पहिलो स्थानमा छ भेनेजुयला । यो देशका महिलाहरु निकै राम्रो भएको मानिन्छ । ७ मिस युनिभर्स, ६ मिस वल्र्ड, ७ मिस इन्टरनेशनल, २ मिस अर्थ गरी यो देशले सुन्दरता प्रतियोगिताको २१ टाइटल जितिसकेको छ । यसका साथै ४० रनर्सअप पनि यो देशको महिलाहरु नै रहेका छन् ।
२ अमेरिकाः दोस्रो नम्बरमा रहने अमेरिकाले १४ ब्यूटी टाइटल्स आफ्नो हात पारेको छ । अमेरिकाले अहिलेसम्म ८ मिस युनिभर्स, ३ मिस वल्र्ड, ३ मिस इन्टरनेशनलको क्राउन जितेको छ । ५५ रनर्सअप पनि यही देशबाटै छन् ।
३ फिलिपिन्सः फिलिपिन्सका महिलाहरुले अहिलेसम्म १२ ब्यूटी कन्टेस्ट जितेका छन् । यसमा ३ मिस युनिभर्स, १ मिस वल्र्ड, ५ मिस इन्टरनेशनल, ३ मिस अर्थको उपाधि यहाँका देशका महिलाले जित्न सफल भएका छन् । यस देशका महिलाले २१ रनर्सअप पनि जितेका छन् ।
४ पुर्ट ओ रिकोः यो देशको नाममा ८ टाइटल र ११ रनरअप छन् । यहाँका महिलाहरुमा ५ जना मिस युनिभर्स, १ जना मिस वल्र्ड, २ जना मिस इन्टरनेशनल रहन सफल भएका छन् ।
५ भारतः भारतको नाममा ८ उपाधि रहेका छन् । भारतीय महिलाले अहिलेसम्म २ मिस युनिभर्स, ५ मिस वल्र्ड, १ मिस अर्थको उपाधि चुमिसकेका छन् । यसका साथै यहाँका महिलाले २१ रनर्सअप पनि जितिसकेका छन् ।
६ युनाइटेड किंगडमरइंगल्याण्डः यो देशको नाममा ८ टाइटल छन् । यहाँका महिलाहरु पनि निकै राम्रा मानिन्छन् । इंगल्याण्डसँग ५ मिस वल्र्ड, ३ मिस इन्टरनेशनलको उपाधि छ । यहाँका महिलाहरुले २० रनर्सअप पनि हासिल गरेका छन् ।
७ अष्ट्रेलियाः अष्ट्रेलियासँग ७ टाइटल्सको साथै २१ रनर्सअप छन् । यहाँका महिलाहरुले २ वटा मिस युनिभर्स, २ वटा मिस वल्र्ड र ३ वटा मिस इन्टरनेशनलको उपाधि हात पारेका छन् ।
८ स्विडेनः स्विडेनसँग ६ वटा टाइटल्स छन् । यो देशका महिला ३ पटक मिस वल्र्ड र ३ पटक मिस युनिभर्स बनिसकेका छन् । १४ वटा रनर्सअपमा पनि यहाँका महिलाले जित्न सफल भएका छन् ।
९ ब्राजिलः ब्राजिलसँग पनि ६ वटा उपाधि छ । ३५ रनर्सअपमा पनि यो देशका महिलाहरु रहेका छन् । यसमा २ मिस युनिभर्स, १ मिस इन्टरनेशनल, १ मिस वल्र्ड र २ मिस अर्थको उपाधि रहेको छ ।
१० जर्मनीः जर्मनीसँग ५ क्राउन र १४ रनर्सअपको टाइटल रहेको छ । २ मिस वल्र्ड, १ मिस इन्टरनेशनल, २ इन्टरनेशनल टाइटल रहेका छन् ।
११ कोलम्बियाः कोलम्बियाको महिलासँग पनि ५ क्राउन टाइटल र २१ रनर्सअप रहेको छ जसमा २ मिस युनिभर्स र ३ मिस इन्टरनेशनल रहेको छ ।